ह्वातै बढ्यो अर्चना पनेरुको रेट ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	ह्वातै बढ्यो अर्चना पनेरुको रेट ! » Nepal Fusion
ह्वातै बढ्यो अर्चना पनेरुको रेट !
२०७६ जेष्ठ २४ गते शुक्रवार
पोर्नस्टार बन्छु भन्दै भारत बसाइ सकाएर नेपाल छिरेकी अर्चना एक्कासी मिडिया अनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आइन । चर्चामा आएको एक बर्षभित्रै उनले दुइ नेपाली फिल्म खेलिन् अनि आधा दर्जनजति म्युजिक भिडियो खेलिन् । पुर्व पोर्न स्टार सन्नी लियोनको नेपाली ट्याग आफै भिर्दै हिँडेकी अर्चनाको बारेमा नेपालसँगै अब भारतमा पनि चर्चा बढेको छ । चर्चित वलिउड अनलाइन दैनिक भास्करले अर्चनाको बारेमा स्टोरी लेख्दै नेपाली सन्नि लियोनको उपमा दिएको छ ।
अझ हाँस्यास्पद कुरा त के छ भने अर्चनाले एक फिल्म खेल्दा साढे चार करोड लिने गरेको समेत वलिउड भास्करले लेखेको छ, जबकी अर्चनालाइ केहि लाखमा मात्र राजु गिरीले ‘जिस्म’ फिल्मबाट डेब्यू गराएका थिए ।
त्यसो त सबटाइटलमा अर्चनाको रेट ४.५ करोड लेखेको अनलाइनले आफ्नो पुर्ण न्यूजमा भने ४.५ लाख लेखेको छ । यसले पनि वलिउड मिडिया नेपाली विषयको समाचार लेख्दा गम्भिर नभएर गलत जानकारी दिन पुगेको छुट्टयाउन सकिन्छ । अर्थ दैनिकमा समाचार छ ।
छुटाउनुभयो की ? यी सेलीब्रेटी, जो आफ्नै प्लेनमा उड्छन् ।
ट्राफिक जाममा घण्टौं बिताउन जो कसैलाई पनि मन पर्ने कुरा होइन । तर, यदि तपाईं सेलिब्रेटी वा सुपरस्टार हो भने तपाईं अत्यन्तै बिलासी गाडी किन्न सक्नुका साथै आफ्नै जेट वा हेलिकोप्टर पनि किन्ने क्षमता राख्नुहुन्छ । नेपालमा भने सानो बजार र थोरै जनसंख्या भएका कारण सेलिब्रटिहरु अझै पनि बिलासी गाडी वा आफ्नै जेट किन्ने हैसियत बनाउन सकेका छैनन् । यद्यपि सामान्य खाले गाडी भने नेपाली सेलिब्रेटिहरुको पनि पहुँचमा हुन थालेको छ, पछिल्लो समयमा । सेलिब्रेटिका अलावा अर्बपतिहरु र ठूला ब्यवसायीक घरानाका मालिकहरु, जो आर्थिक रुपमा निजी बिमान वा हेलिकोप्टर किन्ने क्षमता राख्छन्, ले पनि निजी बिमान वा हेलिकोप्टर किनेको सुनिएको छैन । यहाँ भने त्यस्ता १० सेलिब्रेटि र अर्बपतिहरु प्रस्तुत गरिएको छ जो आफ्नै प्लेनमा आकाशमा उड्छन् र, तल सडकमा हुने ट्राफिक जाम छल्छन् ।
ओपेरा विन्फ्रि विश्व बिख्यात मिडिया सेलिबे्रटि हुन् । सेलिबे्रटि हुनुका साथै उनी फोब्र्समा सुचीकृत अर्बपति पनि हुन् । उनीसँग झण्डै ३ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति छ । उनीसँग ‘बोम्बारडियर ग्लोबल एक्सप्रेस जेट’ छ । उनी सँधैं सो जेटलाई आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्ति बताउने गर्छिन् । टम क्रुजले ‘टप गन’ भन्ने फिल्मबाट सन् १९९४ मा खुबै ख्याती कमाए । त्यसै बर्ष उनले पाइलटको लाइसेन्स पनि लिए । र, त्यसपछि उनले धेरै प्लेनहरु किनिसकेका छन् । उनको सबैभन्दा चर्चित जेट P–51 मुस्ताङ हो ।
हालका अमेरिकी राष्ट्रपति र कुनै बेलाका चर्चित रियालिटि शोका सञ्चालक डोनाल्ड ट्रम्प फोब्र्समा सुचीकृत अर्बपति पनि भएका कारण उनीसँग निजी जेट हुनु अनौठो कुरा भएन । उनीसँग बोइङ ७२७–२३ का साथै हेलिकोप्टर पनि छ । राष्ट्रपति भएपछि भने उनी ‘एयर फोर्स वान’ नामक सरकारी प्लेनमा सयर गर्छन् । ‘एयर फोर्स वान’ बिश्वकै अत्यन्तै सुबिधा सम्पन्न र सुरक्षित प्लेन मानिन्छ ।
हलिउड सुपरस्टार एनन्जिलिना जोली पनि आफ्नै निजी जेटमा उड्छिन् । १६ करोड डलर कुल सम्पत्ति भएकी एन्जिलिनासँग एसआर २२ नामक जेट छ । चर्चित बास्केटबल खेलाडी कोबि ब्रायन्ट हेलिकोप्टरमा उड्छन् । एल ए लेकर्सबाट बास्केटबल खेल्ला लस एन्जलसको सडक ट्राफिकबाट बच्न उनले हेलिकोप्टर किनेका थिए । भारतीय अर्बपतिहरु र सेलिब्रेटिहरु पनि निजी प्लेनको सौखिन रहेका छन् । भारतकै सबैभन्दा धनी अर्बपति मुकेश अम्बानी ७ करोड डलरभन्दा बढी पर्ने बोइङ बिजनेश जेट २ चढ्छन् । सो जेटमा एक्काइसौं शताब्दीको प्रबिधि र भब्यता दुवै भएको बताइन्छ ।
मुकेशका भाई अनिल अम्बानी पनि झण्डै ४ करोड डलर पर्ने ‘बोम्बारडियर ग्लोबल एक्सप्रेस एक्सआरएस’ नामको निजी नेटमा उड्छन् ।टाटा ग्रुपका अध्यक्ष रतन टाटा भने २ करोड डलर माथि पर्ने ‘डासल्ट फाल्कन २०००’ नामक जेट चढ्छन् । यो अत्यन्तै आरामदायी जेट रतन टाटा आफैं पनि चलाउँछन् । यो जेट ५१ हजार फिटको उचाइ र ८ सय ५२ किमि प्रति घण्टाको गतिमा उड्न सक्ने बताइएको छ ।
भारतमा अर्बपतिहरु मात्र नभएर बडिउड स्टारहरु पनि निजी बिमानमै उड्छन् । बलिउड स्टारहरु मध्ये सबैभन्दा पहिले आफ्नै जेट एक्सन स्टार भनेर चिनिने अजय देवगनले किनेका हुन् । उनको जेटमा बढिमा ६ जनासम्म यात्रा गर्न मिल्छ । अजय फिल्क सुटिङ, फिल्म प्रमोशन र आफ्ना ब्यक्तिगत कामका लागि पनि जेटको प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
बलिउडका अर्का एक्सन र कमेडी स्टार अक्षय कुमारको पनि आफ्नै जेट छ । कुनै समय थाइल्याण्डमा वेटरको काम गर्ने अक्षय अहिले निजी बिमानमा हिंड्ने भएका छन् ।